काठमाडाैंमै युवतीले काटिन् प्रेमीको लिङ्ग! -
२४ मंसिर २०७६, मंगलवार १९:१२ 141 पटक हेरिएको
काठमाडौं – काठमाडाैँमै एक युवतीले प्रेमीकाे लिङ्ग काटिदिएकी छन्। प्रेममा धोका पाएपछि मानिसले के-के गर्लान् ? हात काट्ने र आत्महत्या गर्ने गरेका विषय कसैका लागि नौला होइन तर लिङ्ग नै काटिदिने घटना सबैकाे लागि नाैलाे हाे।
महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धका अनुसार प्रेम सम्बन्ध सफल नहुने देखेपछि १९ वर्षीया थिङ थरकी युवतीले प्रेमीको लिङ्ग नै काटिदिएकी छन् । घटनामा मकवानपुर घर भइ बौद्ध बस्दै आएका २१ वर्षीय सुनुवार थरका व्यक्ति सख्त घाइते भएका छन् । ती व्यक्ति काठमाडौंको एक होटलमा कर्मचारी हुन् । बौद्धका डीएसपी रमेशबहादुर सिंहका अनुसार सुनुवारको ओम अस्पतालमा आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
‘आधी काटिएको छ भन्ने हाम्रो टोलीले खबर दिएको छ’, उनले भने, ‘केटीको पनि हातमा चोट लागेको रहेछ ।’ प्रहरीका अनुसार केटा क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्छन् भने युवती बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् । एक वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुबीच हालै विछोड भएको थियो ।
‘घरकाले नमानेको भन्दै केटाले सम्बन्ध अघि बढ्न नसक्ने जनाएको देखिएको छ’, सिंहले भने, ‘त्यसपछि अन्तिम पटक भनेर भेट्दा यो घटना भएको देखिन्छ ।’ प्रहरीले युवतीलाई पनि पक्राउ गरेको छ भने अपराधमा प्रयोग भएको चक्कु पनि बरामद गरेको छ । युवतीमाथि ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान थाल्ने तयारी गरिएको छ ।